Muxuu Farmaajo u diiday inuu ku safro Turkish Airlines? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu Farmaajo u diiday inuu ku safro Turkish Airlines?
Farmaajo ayaa si la-yaab leh u diiday ku socdaalka Turkish Airlines, una doortay ku safarka Ethiopian Airlines, sabab la xariirta Madaxweynaha dalka Jabuuti.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo, ayaa shalay ka ambabaxay Muqdisho, si uu u gaaro Turkiga, kadib casuumaad uu ka helay Erdogan.
Waxuu Farmaajo ka mid yahay 13 hoggaamiye oo Afrikaan ah oo ka qeyb-galaya shir maanta ka furmaya Istanbul, oo looga hadlayo iskaashiga iyo maalgashiga Turkiga iyo qaaradda Africa.
Hadaba Keydmedia Online, ayaa qodob cajiib ah, ka calaameysay socdaalka Farmaajo, kaas oo ah naceybka iyo cuqdadda shaqsiga ah ee kala dhaxeysa Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Farmaajo, wuxuu diiday inuu ku safro diyaaradda Turkish Airlines, oo duulimaad toos ah ku tagta magaalada Istanbul, wuxuuna doortay inuu raaco Ethiopian Airlines, oo ku eg Ethiopia, si uu diyaarad kale oo Turkiga toos u aadeysa uga raaco Addis Ababa.
Sababta uu Farmaajo u diiday duulimaadka Turkish Airlines, ayaa ah in ay muddo 30 daqiiqo ah, ku sii hakaneyso dalka Jabuuti, si uu wajiga uga dadbo MW Ismaaciil Cumar Geelle, ayuu dootay inuu ku dhawaad 10 saacadod ku sugnaado Addis Ababa.
Calaaqaadka Farmaajo iyo Geelle, ayaa xumaaday kadib markii Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, u ololeeyay in cunaqabateynta hubka laga qaado Eritrea oo xoog ku heysta dhul ay leedahay dowladda Jabuuti.
Sidoo kale, Farmaajo, ayaa Jabuuti ugu hanjabay inuu raacdeyn doono safaaraddooda, kadib markii uu Ismaaciil Cumar Geelle diiday inuu Farmaajo ku taageero qalalaasihii siyaasadeed ee uu ka dhex abuuray Somaaliya iyo Kenya.
Agaasimihii hore ee NISA, eedeysane Fahad Yaasiin, ayaa sidoo kale, ka careysan ciqaabtii uu kula kulmay garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti, Sep 17, 2021, taas oo sii xoojisay khilaafka Farmaajo kala dhaxeeya Geelle.
KON, ayaa sidoo kale, fahansan in Farmaajo uu Abiy Axmed u dhigay garoonka diyaaradaha, waraaq uu ugu hambalyeynayo guulo uu ka gaaray dagaalka sokeeye ee ka socda waqooyinka Itoobiya.